Uganda: 'Waxay igu khasbeen inaan dagaallamo, hadalkanna way ii sheegeen'
Wednesday November 24, 2021 - 08:08:39 in Wararka by Hargeisa Head OFFICE
Nin horay uga tirsanaa kooxda la magac baxday Isbahaysiga Xoogagga Dimuqraaddiga ah, oo ah fallaagada lagu eedeeyay inay mas'uul ka yihiin qaraxyadii ismiidaaminta
ahaa ee dhawaan ka dhacay caasimadda Uganda, ayaa sheegay in kooxdan xiriirka la leh ururka Dowladda Islaamiga ah ee IS ay cabsigelin u adeegsato sidii ay xubnaheeda usii heysan lahayd.
"Kooxda waxaa lagu dhaqaa shareecada. Haddii aad wax xaddid, gacanta ayaa lagaa goynayaa. Haddii aad kufsatid cunug yar, waad dhimaneysaa. Haddii aad qof ka sheegto been oo lagu ogaado, waad dhimaneysaa," ayuu BBC-da ku yiri ninkan oo magaciisa laga dhigay Peter si loo ilaaliyo aqoonsigiisa saxda ah.
Qosol ayuu ku dhex darayay hadalkiisa intii uu wareysiga socday oo dhan - taasoo u muuqatay inay sabab u tahay walwalka uu ka qaaday arrimaha uu soo maray.
Ninkan dhallinyarada ah waxaa si khasab ah u kaxeysatay kooxda mintidiinta ah muddo labo sano ah ayuuna ka tirsanaa, isagoo muddadaas gudaheeda goob joog u ahaa dhacdooyin dad lagu gowracay - oo mararka qaar ay sameynayeen dadka madaxdiisa ah.
Kooxda ADF oo cabsidaas dadka ku shaqaaleysiisata sidoo kalena heysata fikradda kooxda Islaamiga ah ee IS oo ay xiriir la leedahay ayaa mar kale khatar muuqata ku noqotay dalka Uganda.
Muddo sannado ah, dowladda Uganda waxa ay sheegeysay in xoogagga ADF ay ka adkaatay, balse arrintaas hadda waxa ay u muuqataa mid aan xaqiiqo ahayn.
Militariga Uganda ee ka howl gala galbeedka waddankaas ayaa xoogagga ADF ku khasbay inay ka tallaabaan xadka
Qalalaase isdabajoog ahaa oo socday tan iyo bishii October, oo ay ka mid yihiin weerarradii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada Kampala, ayaa lagu dilay ugu yaraan siddeed ruux, oo ay ku jiraan saddex mintidiin ah, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 40 qof oo kale.
Kooxda ADF waxaa markii ugu horreysay la aasaasay 1990-meeyadii, waxaana yagleelay nin lagu magacaabo Jamil Mukulu oo sheegay inuu ka careysnaa sida ay dowladda Uganda ula dhaqanto dadka Muslimiinta ah.
Waxaa xoogagga kooxdan laga saaray saldhigyadii ay ku lahaayeen gobolka buuraleyda ah ee Rwenzori, halkaasoo dagaayahannadeeda ay ku weerari jireen xaafadaha, iyagoo mararka qaarna iskuullada gubi jiray wixii ka dmabeeyay sanadkii 2000.
Haraadigooda ayaa ka tallaabay xadka, waxayna u baxsadeen dhinaca bariga waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraaddiga ah ee Congo.
Markii hore, fallaagada ADF ee halkaas tagay waxay la shaqeyn jireen bulshooyinka maxalliga ah si ay ganacsi u sameystaan, arrintaasoo u sahashay inay dad badan ka bartaan magaalada Beni, sida lagu sheegay warbixin ay Qaramada Midoobay soo saartay sanadkii 2011-kii.
Balse taas ayaa isbaddashay kaddib markii ay billaabeen inay weerarro ku qaadaan dadka Masiixiyiinta ah ee ku nool aaggaas.
Khiyaanadii ay ku sameeyeen kooxda fallaagada ah
Waqtigaas kaddib ayay ahayd markii Peter, oo ku noolaa Uganda, uu go'aansaday inuu aado DR Congo, si uu shaqo uga raadsado. Qof ayaa u sheegay in halkaas laga sameeyo lacag.
Sababta loogu kaxeeyay xadka dhinaciisa kale wuxuu ogaaday oo kaliya markii ay rag hubeysan kasoo baxeen howdka xilli uu gudaha aad ugu sii galay DR Congo, markaasoo ay ku amreen inuu raaco.
Si khasab ah oo qori caaraddiis ah, ayaa Peter loogu qoray inuu ka mid noqdo dagaallamayaasha kooxda ADF, inkastoo hadda kooxdu ay isku magacowdo Magaalada Towxiidka iyo mujaahidiinta (MTM).
"Ma aanan helin hal daqiiqo oo aan uga fikiro waxa dhacayay. Waxaan galnay dhowr safar oo uu ka mid ahaa mid aan raacnay doon, ka hor inta aannaan imaanin xerada tababarka," ayuu ku yiri BBC-da.
"Marka aan imaato xaruntooda, waxay kuu aqrinayaan shuruucda: haddii aad isku daydo inaad baxsato waa lagu bireynayaa, haddii aad diiddo tananarka waa lagu bireynayaa."
Peter waxa uu sheegay in kooxda MTM ay heshiis la gashay kooxda IS xilligii uu hoggaamiyaha u ahaa Abu Bakar Baqdaadi.
Baqdaadi waxa uu magaciisa soo shaac baxay sanadkii 2014-kii, xilligaas oo uu ku dhawaaqay in "khaliifo" laga dhisay Ciraaq iyo Suuriya - waxa uuna kooxda hor kacayay ilaa sanadkii 2019-kii, markaasoo uu ku dhintay howlgal militari oo ay fuliyeen ciidamada Mareykanka.
"Nalooma oggeleyn inaan wax sameyno, sida inaan weerar ku qaadno xero militari, ilaa amar sare aan helno," ayuu yiri Peter.
"Dhammaan dagaalyahannadu waxay ogaayeen in hoggaamiyahooda kaliya ee ay leeyihiin uu ahaa madaxa IS. Iyaguna ay yihiin ciidamadii Alle."
Dagaalyahanno carrur ah "oo aan cabsaneynin"
In uu qof isku dayo baxsasho aad bay u adkeyd, maadaama qof walba oo aad kala hadli lahayd arrintaas aad ka baqeyso inuu ku dacweeyo ama ku fashilo, sida uu sheegay Peter.
Hase yeeshee qaar badan oo ka mid ah dhallinyaradii la qoray waxay daacad u noqdeen kooxda, iyagoo u arkayay in qoriga AK-47-ka uu yahay "qayb ka mid ah jirkooda", sida uu ku andacooday Peter.
Dacwad ka dhan ah aasaasaha ADF, Jamil Mukulu, ayaa ka billaabatay Kampala sanadkii 2018-kii
"Qaar ka mid ah dagaalyahannada ugu daacadsan waxay ahaayeen carruur ay da;'doodu u dhaxeyso 10 ilaa 15 sano," ayuu yiri.
"Kuwaas waxay si deg deg ah u oggolaanayeen inay naftooda u huraan howlgallada. Ma qabaan wax cabsi ah, sababtoo ah waxa ay aaminsanaayeen waxayaabaha loo sheegay ee ahaa inay jannada galayaan. Badankood waa carruur kasoo jeedda Congo, oo laga soo kaxeystay qoysaskooda markii la weeraray xaafadahooda," ayuu yiri.
Baaritaanno ay sameeyeen xafiisyada xuquuqda aadanaha ee Qaramada Midoobay ayaa muujiyay in muddadii u dhaxeysay January 2019-kii ilaa June 2020-kii kooxda ADF 1,066 ruux oo rayid ah ku dileen 59 carruur ahna ku kaxeysteen weerarro ay ka fuliyeen gobollada ku yaalla waqooyiga DR Congo ee Kivu iyo Ituri.
ADF ayaa noqotay koox caalamka indhaheeda u kala furtay kaddib markii uu hoggaankeeda dhaxlay Musa Baluku oo ah nin u dhashay Uganda oo da'diisu tahay 40 iyo dhowr sano.
Ninkii ka horreeyay ee kooxdaas horkacayay waxaa sanadkii 2015-kii lagu xiray Tanzania oo xad la wadaagta DR Congo iyo Uganda labadaba, waxaana markii dambe loo gacan geliyay Uganda.
Muuqaal la shaaciyay sanadkii lasoo dhaafay ayuu Baluku ku sheegay in kooxda AFD ay isu badashay gobol ka tirsan dowladda Islaamiga ah.
Intii uu maamulka hayay, waxaa la sheegay in kooxdu ay dhaqaale ka heshay shabakadaha maaliyadda ee ururka IS.
Intii u dhaxeysay 2016-kii ilaa 2017-kii, ADF waxay muuqaallo astaantooda ka muuqato ku sii deyneysay baraha internet-ka ee IS iyagoo sheegayay inay qayb ka yihiin kooxaha jihaad doonka ah ee caalamiga ah.
Markii la weeraray xabsiga Kangbayi ee ku yaalla Beni bishii October ee sanadkii 2020-kii, oo in ka badan 1,000 maxaabiis ah laga sii daayay, ADF iyo IS labaduba waxay sheegeen inay weerarkaas mas'uul ka yihiin.
Bakulu, oo liiska shakhsiyaadka cunaqabateynta saaran tahay ee Golaha Amaanka lagu daray bishii August ee sanadkii 2020-kii, ayaa u muuqday inuu soo jiitay dagaalyahanno badan oo uga imaanayay gobollo fog fog.
"Kooxda ujeeddadeedu ma aha Uganda kaliya," ayuu yiri Peter.
"Bartilmaameedkoodu waa in Islaaka uu qabsado caalamka, waxaa ku jira dagaalyahanno kasoo jeeda dalalka Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi, Soomaaliya iyo xitaa carab," ayuu yiri ninkan dagaalyahanka hore ahaa.
Cafis loo fidiyay dagaalyahannada
Ilaa hadda ma kala cadda in weerarradii dhawaan dhacay ay yihiin kuwo kasoo gudbay xadka ama inay ahaayeen kuwo lagu qorsheeyay gudaha Uganda.
Booliska ayaa sheegay inay meelo kala duwan oo dalkaas ka tirsan ka burburiyeen wax ay ugu yeereen shabakado argagixiso oo maxalli ah.
Muxuu yahay wadaadka Muslimka ah ee loo dilay qarixii ka dhacay Kampala?
Afrika waxay noqoneysaa "saldhigga cusub ee kooxaha jihaad doonka ah"
Amniga ayaa sare loo qaaday gudaha Uganda kaddib weerarradii ismiidaaminta ahaa
Howlgalladii daba socday weerarradii dhacay isbuucii lasoo dhaafay, waxa ay dowladdu kusoo xirtay in ka badan 100 qof halka lagu dilay 7 ruux oo la tuhunsanaa.
Waxa ay sidoo kale dowladdu isku dayeysaa inay xubnaha ka tirsan mintidiinta kasoo saarto fallaagada, ayna si ay uga dhex baxaan nolosha qalalaasaha.
Peter waxa uu ugu dmabeyntii ku guuleystay inuu kasoo baxsado kooxdaas dhowr biloowd ka hor, waxa uuna cafis rasmi ah ka helay Golaha cafiska u fidiyay dagaalyahannada ee Uganda. Wuxuu ka mid ahaa 23 dagaalyahan oo ka tirsanaa ADF oo magangalyo soo raadsaday tan iyo sanadkii 2019-kii.
Waxa uu helay lacag yar oo dib u dejin ah oo gaareysa $100 (£75).
Balse ma uusan helin wax caawinaad dhinaca jirka ah ama dhaqancelin dhinaca maskaxda ah, aad bayna ugu adag tahay inuu shaqo caadi ah helo.
Arrimaha noocaas ah ayaa dowladda ku adkeynaya in ay burburiyaan ururrada mintidiinta ah.